Gudniinka gabdhaha iyo fasaxa xagaaga! | Somaliska
Iyadoo hada uu bilowday fasaxa xagaaga oo dad badan ay u safrayaan wadankoodii hooyo ayaa waxaa soo baxday fadeexad ku saabsan gudniinka gabdhaha. Warbixin uu qoray wargeyska Norrköpings Tidningar ayaa lagu sheegay in la ogaaday in 60 gabdhood oo dhigta iskuulada magaalada Norrköping lagu sameeyay gudniinka ilaa bishii maarso.
30 gabadhood oo wada dhigata isku fasal ayaa la sheegay in dhamaantood la wada guday, iyadoo 28 ka mid ah gabdhaha lagu sameeyay gudniinka fircooniga. Gudniinka gabdhaha ayaa waxaa lagu ogaaday baaritaan caafimaad oo uu sameeyay iskuulka iyo hay’ada socialka.
Khatarta gabdhaha in la gudo ayaa la sheegay in ay siyaado fasaxa xagaaga iyadoo waalidiinta qaar ay gabdhaha u kexeeyaan wadankii hooyo iyagoo ka dibna soo guda.
Petra Blom Andersson oo magaalada Norrköping u qaabilsan caafimaadka ardada ayaa sheegay in ay waalidiinta ku wargaliyeen in haddii ay la soo noqdaan gabdhaha oo la guday ay xabsi gali doonaan.
Gudniinka gabdhaha nuuckasta ayaa mamnuuc ka ah Sweden. Ma ahan markii ugu horeysay ee ay soo baxdo fadeexad la xiriirta gudniinka, iyadoo horay waalidiin Soomaali ah xabsi iyo ganaax loogu xukumay ka dib markii ay gabdhaha gudeen.
Waa wax aad looga naxo oo fool xun in gabdho yar-yar jirkooda loo jar-jaro si aan shareecada sal iyo raad toona ku lahayn ( Gudiinka fircooniga) kana soo hor jeeda dhamaanba qawaaniinta aduunka.
waxaan filayaa arintani haday dhacdayna in aanay tirada intaa leeg ahayn ee ay buun buunini ku jirto, waayo waalidka maanta isagoo weliba sweden jooga ilmihiisa waxaa ku sumaynayaa waa qof ay aqoonta diinta iyo takaleba ku yartahay waayo waa hore ayaa dhaqankaa laga ilbaxay.
sababta aan sidaa u dhahayna waxa weeye 30 jir baan ahay la igumana samayn waxaas anigo wadankii ku dhashay kuna dhalay inkastoo markaan yaraa caqabado xaga bulshadaa iga soo mareen oo la iguba caayi jiray. Alxamdulilaah waan u duceeyaa waalidkay oo dhaqankaa xun ii quudhin.
diidta maha qofkasta inuu siduu qiyaso uga hadlo gudniinka gabdhaha wa wax banana diintenab ku cad xadgudubka dinta iska ilaaliya iyo dhaqamada gaalada maskaxda idinka shubtay qofkii donaya ha dhegeysto sheekh unal ayaa kahadlaya gudni ka gabdhaha iyo in uu bana yahay lkn kan firconiga ladhaha mabanana ilaahay baa inaga og
kkkkkkkk Adeer gaaladu dumarka bahalkooda haka dhamaadaan , hadda kadibna waxay soo wadaan gabadhii waalidkeedu waxan ay boyfriend uugu yeedhaan u ogalaan waaya inuu ka sinaysto, waalidkaas waa la xidhayaa…!!!! yaaab.com ma haday bilaabeen sheekadaasna , ….waa la gudi mahee anu wiliba waxaan odhan lahaa Alxanlaha hala geeyo gabdhaha sida birihii gabigoodaba hala alxamo.futada haka kaajaanbee.
iftiimiyaha runta says:
subxaanallah war Somaliya sida tan maa udanbeesey marwo iyo xawo garyaqaan inaalilaahi wainaa ileyhi raajicuun walaahi maanba moodeyn diinta sheekh umul malahan sheekh umul waa sheekh caalim ah lkn waa biniaadam gaf galikara tankale marwo diint saa rabto haisaga dhigan wax aadan cilmi ulaheyna haku danbaabin Somaliyey diinta alle barta iska daaya sheekh hebel ama wadaad hebel waa waxaas waxa aan isku dilno ama aan isku dhibaateyno qabiil iyo diiin mahadsanidiin yaana laxanaaqin no cay
horta hore somali maxamed waxabaa niga qasan sidiinabo anaga hadaa nahay soamali wan isgudnaa lkin hada majoogno wadankeyna waxaa fiican inaa ku dhaqantaan wadanka aad joogtan dhaqankiisa . hadan ka hadlana xaga gudowka diinnteyna waxay qabtaa in lagudo gabdhaha lkin ma aho firconiga ee waxaa weye suno marka iska dhafa waxa iska dawa wadiin
Ramdaan kariim iskadaaya isqab qabsiga macnaha leheen waa bilbarakeesan ee ka faa iideesto alla bariga badiyo qur aanka aqristo waa bishii quraanka kariimka la soo dajiyay كل عام وانتم بخير رمضات كريم